Safiirka cusub ee Britain oo yimid Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magalada Muqdisho waxaa todobaadkaan soo gaaray safiirka Cusub ee dowladda Ingiriiska u soo magacaabay Soomaaliya,isaga oo si rasmi ah Shaqadiisa uga bilaabay Magalada Muqdisho.
Safiirka cusub ee Ingiriiska u soo magacaabay Soomaaliya Ben Fender OBE ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay Shaqada Cusub ee loogu soo igmaday Soomaaliya si wanagsan uu u gudan doono,kadib Muuqaal lasoo dhigay Barta Twitter-ka.
Ben Fender OBE ayaa bedelay safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay dowladda Ingiriiska David Concar,waxaan uu horay uga soo shaqeeyay wadamo ay ka mid yihiin, Afghanistan, Iran, France iyo Sierra Leone.
Si kastaba dowladda Ingiriiska ayaa waxa ay ka mid tahay Dowladaha taageera Soomaaliya,waxaana safaaradeeda ay ku taallaa Gudaha xerada Xalne ee Magalada Muqdisho oo ay u joogaan saraakiil taageera siiya Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ee dagaalka kula jira Ururka Al-Shabaab.